Mogadishu Journal » 2019 » December » 30
Al-Shabaab oo sheegtay qaraxii Ex-Control Afgoye
Mjournal :-Xarakada Al-Shabaab ayaa sheegatay inay ka dambeysay qaraxii qasaaraha badan uu ka dhashay ee dhowaan ka dhacay isgoyska Ex Control Afgooye. Sida ay baahiyeen warbaahinta taageerta Al-Shabaab Afhayeenka guud ee Xarakada Al-Shabaab, Sheekh Cali Maxamuud Raage hadal uu...
Israsaaseyn Caawa ka dhacday Magaalada Dhuusa-mareeb
Mjournal :-Wararka Caawa laga helayo Magaalada Dhuusamareb ee Caasimadda Galmudug ayaa waxaa ay sheegayaan in meel u dhow Xarunta Inji ay is rasaaseyn ku dhex-martay Ciidamo ka tirsan Dowladda iyo ilaalada hoggaanka Ahlusunna. Is rasaaseynta ayaa ka dambeysay,kadib markii labada...
Dhaawacyo loo qaaday Qatar iyo Kheyre oo sagootiyey
Mjournal :-Ra’iisul Wasaaraha XFS, mudane Xasan Cali Khayre iyo xubna ka tirsan guddiga gurmadka qaran ee dhawaan loo magacaabay isku dubba ridka howlaga gurmadka, ayaa maanta garoonka diyaaradaha Caalamiga ah ee Aadan Cabulle kusoo dhaweeyay diyaarad dowladda Qatar, ay u soo...
Mjournal :-Dowladda Qatar ayaa diyaarad milateri oo gargaar caafimaad sida u soo dirtay magaalada Muqdisho, maalin kaddib qaraxii dad badan ku dhinteen oo ka dhacay Ex Koontarool. Amiirka Qatar Sheekh Tamiim Bin Hamad Al-Thani ayaa amarkiisa lagu soo diray, waxaana saaka...
A Turkish military cargo plane landed in the Somali capital on Sunday to evacuate people badly wounded in a devastating truck bombing that killed at least 90 people including two Turkish nationals. The plane also brought emergency medical staff and supplies, the Turkish embassy...
Somali government has revealed 12 people are still missing following a deadly truck bombing in the outskirts of the capital Mogadishu. The Emergency Response and Coordination Committee formed by Prime Minister Hassan Khaire said in its latest report Monday morning the number of...
Al-Shabaab oo weerar khasaaro geystay ka fuliyey duleedka Mandheera
Mjournal :-Xubno loo maleynayo inay ka tirsan yihiin Ururka Al-Shabaab ayaa waxaa ay weerar sababay khasaaro dhimasho iyo dhaawac ah ka fuliyeen duleedka Magalada Mandheera ee Gobolka Waqooyi Bari Arroornimadii hore ee subaxdii Axadda. Weerarka ayaa yimid,kaddib markii Rag...
NISA oo dal Shisheeye ku Eedeysay qarixii ka dhacay Ex-Koontorool Afgooye
Mjournal :- War ka soo baxay hay’adda NISA ayaa lagu sheegay in dowlado Shishiiye ay ku lug leeyihiin qarixii khasaaraha badan geystay ee Maalin ka hor ka dhacay Isgoyska Ex-Koontorool Afgooye ee Magaalada muqdisho. Qoraal lagu daabacay Barta twitter-ka ee Hay’adda NISA...
Dowladda Libya oo codsatay in maxkamad la soo taago General Haftar
Mjournal :-Hoggaamiyaha dowladda Libya ee ay taageeraan caalamka Khalid Al mishri ayaa ka codsaday madaxda dalalka dunida in ay u fidiyaan taageero dhaqqale,mid ciidan iyo mid dibolomaasi. Hoggaamiyaha dowladda ay aqoonsan tahay Qaramada Midoobe ee dalka Libya ayaa sidoo kale ugu...
Mjournal :-Taliska Ciidamada Mareykanka ee Africa ayaa war saxaafadeed ka soo saaray duqeyn ay shalay ka fuliyeen deegaano ka tirsan Gobolka Shabeellaha Hoose, kaasoo ay ku dileen saraakiil ka tirsan Al-Shabaab. Duqeyntan ayaa ka kala dhacday deegaanka Kuunyo Barrow iyo Caliyow...
Guddiga Gurmadka oo sheegay in la la’yahay 20 qof
Mjournal :-Guddiga Gurmadka ee ku howllan tirakoonka dadkii ku waxyeelloobay Qaraxii Sabtigii ka dhacay Ex-Koonatarool Afgooye ayaa sheegaya in 25 qof ay maqanyihiin. Saraakiisha Guddigaaas oo warbaahinta kula hadlay Muqdisho ayaa waxaa ay sheegeen in 22 Lab ah iyo 3 dheddig ah...